Teshima, Shinjuku, Shibuya, Suginami ရှိအလုပ်များ - အကယ်၍ သင်သည်အလုပ်တစ်ခုရှာနေလျှင် [Genvers]
Teshima, Shinjuku, Shibuya, Suginami ရှိနေရာများတွင်စုဆောင်းခြင်းနှင့်အချိန်ပိုင်းအလုပ်အရစုဆောင်းခြင်း
Toyoshima, Shinjuku, Shibuya, Suginami တွင် ၀ င်ရောက်စုဆောင်းသည်
Teshima, Shinjuku, Shibuya, Suginami အတွက်အလုပ်ခွင်သတင်းအချက်အလက်
【34件掲載】豊島・新宿・渋谷・杉並の現場求人・バイト募集。建設・土木・建築・運輸・警備の仕事を中心に様々な職種を探せます。手に職をつけて自分のキャリアを磨いていこう！株式会社 ケイ・マックス,株式会社リンクス　～ホームドクター119番～など豊島・新宿・渋谷・杉並の現場求人を掲載。
[Katsushika Ward] အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ၁၀၀,၀၀၀ သည် 10t2t မောင်းသူဖျက်သိမ်းခြင်း
[Koto Ward] ပုံသဏ္workာန်လက်သမားလက်သမားယန်း ၁၈၀၀၀ (သို့) ထို့ထက်ပိုသောနေ့စဉ်လစာ!
Teshima, Shinjuku, Shibuya, Suginami အတွက်အလုပ်ခွင်ရှာဖွေမှုရလဒ်များ
34 ကိစ္စTeshima, Shinjuku, Shibuya နှင့် Suginami တို့တွင်အလုပ်များရှိပါသည်။ (၁-၃၀)
[ရာသီဥတုကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းမရှိသောပြည်တွင်းဖြိုချခြင်းလုပ်ငန်း] သင်၌အတွေ့အကြုံ (သို့) အရည်အချင်းမရှိလျှင်ပင်တည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေကိုရယူပါ။ပိုက်ဆံတွေကိုချက်ချင်းဝင်ယူပြီးအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပါ။နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုအိုကေ! [လက်ရှိအလုပ်သမားများကြီးကြပ်ရေးမှူးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများစုဆောင်း!ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအများဆုံး ဦး စားပေးကုသမှုပေးမည်။ ] [ဂုဏ်ပြုလွှာသုံးငွေ MAX ယန်း ၆၀၀၀၀ (ငါတို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အတူ)]
■ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအလုပ်များနှင့်အတူလိုက်ပါခဲ့သည်။ ■အတွင်းပိုင်းလက်မှုပညာသည်များကိုဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်အထောက်အပံ့ဝန်ထမ်းများကိုဖျက်သိမ်းခြင်း■ရာသီဥတုကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိသောကြောင့်ထိုနေရာသည်ရုတ်တရက်အချည်းနှီးဖြစ်လာမည်ကိုစိုးရိမ်စရာမလိုပါ။လုပ်ငန်းခွင်တွင်းအတွေ့အကြုံများကိုအပြည့်အဝ အသုံးချ၍ အလုပ်လုပ်လိုသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုချက်ချင်းအသုံးပြုနိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။အကယ်၍ သင်သည်လုံးဝကွဲပြားသောအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေသည်ဖြစ်သော်လည်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၌စတင်လုပ်ကိုင်လိုပါကလက်မှုပညာရှင်၏လုပ်ဆောင်မှုဖြင့်စတင်နိုင်ပါသည်။ သင်နှင့်ကိုက်ညီသည့်နည်းဖြင့် "ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်ငွေအမြောက်အမြား ၀ ယ်လိုသည်" နှင့် "ကျွန်ုပ်သည်ငွေအနည်းငယ်လိုချင်သည်" ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ★လတ်တလောတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်သမားများကြီးကြပ်မည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုရှာဖွေနေသည်။အများဆုံး ဦး စားပေးကုသမှုရှိပါတယ်! ★ MAX ၆၀,၀၀၀ ယန်း (ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အတူ) ကုမ္ပဏီသို့ဝင်ရောက်ခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါသည်။ ★မြှင့်တင်ရေးဆုကြေးရှိပါသည်။အဲဒါကျိုးနပ်ပါတယ်။
နေ့စဉ်လစာ - ၁၃,၀၀၀ မှ ၃၈၀၀၀ ယန်း + အမျိုးမျိုးသောထောက်ပံ့ကြေးများ (သီးခြားစီသယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) * ဆိုက်ကိုစောစီးစွာအဆုံးသတ်လျှင်ပင်ငွေပေးချေမှုကိုအပြည့်အဝပြုလုပ်မည် (နေ့စဉ်လုပ်ခအာမခံချက်) * အချိန်မရွေးစွမ်းရည်ပေါ် မူတည်၍ ...
Kmax Co. , Ltd. အတွက်အလုပ်များဟုတ်လား
[လစဉ်လစာ ၃၅၀,၀၀၀ သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောလစာ] ခေါင်မိုးများ၊ ရေစိုခံဆေးများ၊များပြားသောအလုပ်များကြောင့်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း→လခမြင့်မားသောလစာ!ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်ခန့်ထားခြင်းထက်နည်းပညာကိုခန့်မှန်းတွက်ချက်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်လှုံ့ဆော်မှုပေါ် မူတည်၍ ၀ င်ငွေပိုရနိုင်သောကုမ္ပဏီဖြစ်သည်!
[ခေါင်မိုးအလုပ်၊ ရေစိုခံအလုပ်၊ ပန်းချီလုပ်ငန်း] ၀ န်ထမ်း
Meiwa Kenso Co. , Ltd. ဂျော့ဘ်ဟုတ်လား
ပန်းချီဆရာ★ဗိသုကာဆိုင်ရာသုတ်ဆေးဝန်ထမ်းများ☆အတွေ့အကြုံရှိသည့်အသက်အရွယ်အရေးမကြီးပါ။ ♪နေ့စဉ်လစာ ၁၀၀၀-၂၀၀၀၀ ယန်း★ညှိနှိုင်းရန်တစ်ပတ်လျှင် ၂ ရက်!ကောင်းသောစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်နှင့်အတူများစွာသောစီမံကိန်းများ! ★အရည်အချင်း☆သင်၏《 လှုံ့ဆော်မှု / စိတ်အားထက်သန်မှု》 you အကယ်၍ သင်စိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။စာတိုတောင်းသောလျှောက်လွှာကိုကြိုဆိုပါသည်
■ [ကုမ္ပဏီ] [က] ဗိသုကာပန်းချီရေးဆွဲသော ၀ န်ထမ်းများ (အတွေ့အကြုံမရှိ၊ အတွေ့အကြုံရှိသူများအတွက် ဦး စားပေးကုသမှု) နေ့စဉ်လစာ ၁၀,၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀ ယန်း (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များအပါအ ၀ င်) ★အတွေ့အကြုံရှိသူကော်မတီနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း★ ...
အဆိုပါ site ကိုတိုကျိုနှင့် Saitama / Chiba / Kanagawa တွင်★☆★တိုက်ရိုက် / တိုက်ရိုက်ပြန်လာ OK ★☆★
☆အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုကြိုဆိုသည်။အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု! ☆တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ၊ full ပြည့်စုံသောလက်မှုပညာရှင်များအတွက်လစာတိုးလာလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။
အိမ်တွင်းလုပ်ငန်း (အလင်းရောင်ကောင်းကင် / ဘုတ်) ①အတွေ့အကြုံရှိသူ②အတွေ့အကြုံမရှိသူ
ပြည်ထဲရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူတစ် ဦး ၏နေ့စဉ်လစာ① ၁၂၀၀၀ ယန်း ~ အတွေ့အကြုံရှိသူတစ်ယောက်၏နေ့စဉ်လစာ② ၁၀,၀၀၀ ယန်းလစာဥပမာအတွေ့အကြုံရှိသူနေ့စဉ်လစာ ၁၂၀၀၀ ယန်း× ၂၅ ရက်လစာလစာ ၃၀၀၀၀၀ ...
Kanto ဒေသရှိအဓိကနေရာများ၊ အဓိကအားဖြင့်တိုကျိုနှင့် Saitama စီရင်စု ၂၃ ခုတွင်တည်ရှိသည်။ တိုက်ရိုက် / တိုက်ရိုက်ပြန်လာ
MS Planning Co. , Ltd. ၏အလုပ်များဟုတ်လား
အလုပ်တွေအများကြီးနဲ့လက်မှုပညာရှင်များကိုချက်ချင်းစုဆောင်းမှု!အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု!အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့လူတွေတောင်မှအိုကေပါတယ်။သငျသညျခြစ်ရာကနေနည်းပညာသင်ယူနိုင်ပါတယ်! * စစ်ပြန်များသည်မြင့်မားသောယူနစ်စျေးနှုန်းဖြင့်ကန်ထရိုက်တာအဖြစ်လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။
လစဉ်ယန်း ၂၃၇,၀၀၀ ယန်းမှ ၄၂၆,၆၀၀ ယန်းသို့မဟုတ်လခယန်း ၁၀,၀၀၀ ယန်းမှ ၂၀၀၀၀ ယန်း * (အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်) * စစ်ပြန်များသည်ကန်ထရိုက်တာအနေဖြင့်ယူနစ်မြင့်မားသည်။
စီရင်စုရှိဆိုက်များနှင့်တိုကျိုရှိရပ်ကွက် ၂၃ ခု၊ အဓိကအားဖြင့် Saitama City၊ Saitama Prefecture
Omiya Floor Co. , Ltd. ဂျော့ဘ်ဟုတ်လား
[မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာလုပ်သားများ] [မြေပြင်ပေါ်တွင်မောင်းနှင်နိုင်သူများ] ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်သောအစကိုထောက်ခံသည်။ ★အတွေ့အကြုံရှိသောလူနာ၏ ဦး စားပေးကုသမှု၊ အဆောင်ပြီးပြည့်စုံသည့်★
◆နေ့စဉ်လစာ / ၁၃,၀၀၀ မှ ၁၆၀၀၀ ယန်း * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်များကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။ မင်းရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအရမင်းကိုလစာတိုးပေးမှာပါ
S Saitama City, Saitama Prefecture, Omiya, Koshigaya, Kumagaya, Kawagoe စသည်တို့ Saitama စီရင်စုနှင့်တိုကျိုတစ်လျှောက်လုံးတွင်တည်ရှိသည်။
Otaka Construction Co. , Ltd. မှအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုဟုတ်လား
Koei Sumiso Co. , Ltd. မှအလုပ်များဟုတ်လား
T-Planning Co. , Ltd. ဂျော့ဘ်ဟုတ်လား
ခိုင်မာသည့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် ၀ န်ထမ်းသစ်များစုဆောင်းခြင်း★ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုအထူးဂရုစိုက်ခြင်း။အစပြုသူများကိုကြိုဆိုပါတယ်လှုံ့ဆော်မှုပေါ်မူတည်။ မြင့်မားသောဝင်ငွေ!ဒါဟာလူတိုင်းလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပါ။
ဖြိုဖျက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ 3t.4t အမှိုက်ပုံစစ်ဆင်ရေး၊
ယန်း ၁၁၀၀၀ မှနေ့စဉ်လစာ
Itabashi / Akatsuka နှင့်တိုကျိုရှိ site တစ်ခုစီ
Kosei Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
Sekikawa စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းစု, လီမိတက်
[နေ့စဉ် / အပတ်စဉ်ငွေပေးချေမှုပုရွက်ဆိတ်များ! ] သီးသန့်အခန်းခွဲခန်းနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း★အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောချက်ချင်းပင်အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ bar bar ဘားအားဖြည့်ခြင်း
လက်မှုပညာရှင် - နေ့စဉ်လစာယန်း ၁၆၀၀၀ ~ အတွေ့အကြုံမရှိသူ - နေ့စဉ်လစာ ၁၁၀၀၀ ယန်း ~ (သင်တန်းကာလနှင့်)
Genba အမြောက်အများကဲ့သို့သောရုံး (Ichikawa City, Chiba Prefecture)၊ တိုကျိုရှိနေရာများ၊ Chiba ဒေသ။
Sekikawa Kogyo Co. , Ltd. အလုပ်များဟုတ်လား
Komura Kogyo ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ယန်း ၁၂၀၀၀ မှနေ့စဉ်လစာ (အခြားထောက်ပံ့ကြေးဖြင့်) ကျွန်ုပ်တို့သည်အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်။ စမ်းသပ်ကာလ★ရရှိနိုင်သည့်လစဉ်ယန်း ၃၅၀,၀၀၀ ယန်း (သို့) ဖြစ်နိုင်သည်★
အဓိကအားဖြင့် Kawagoe City, Saitama Prefecture, စီရင်စုရှိ site တစ်ခုစီနှင့်တိုကျိုဆင်ခြေဖုံး။
Komura Kogyo Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
Yoshikawa Gumi Co. , Ltd.
Earthwork ★ Toko [Company / A] ☆နေ့စဉ် / အပတ်စဉ်ငွေပေးချေမှုဆွေးနွေးချက် employees ၀ န်ထမ်းမဟုတ်သူများကိုတက်ကြွစွာစုဆောင်းခြင်း [A] တစ်ပတ်လျှင် ၃ ရက် ~ OK ☆ဘွဲ့ရအသစ်များ၊ အလယ်အလတ်တန်း ၀ င်အလုပ်များ၊ ကွက်လပ်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုလက်ခံခြင်း☆ကုမ္ပဏီ၏အိမ်ရာရရှိနိုင်ပါသည်★ပြောင်းလဲရန်ကြိုဆိုပါသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အလုပ်အကိုင်များ☆အချိန်ပိုင်းအလုပ်ဆိုသည်မှာမိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်။ စတိုင်ဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်★သင်သည်ဝေးဝေးလျှောက်ထားနိုင်သည်
တစ်ပါတ် 2-3 ရက်
① Earthwork [ဝန်ထမ်း / အချိန်ပိုင်းအလုပ်]] Tobi အလုပ် [၀ န်ထမ်း / အချိန်ပိုင်းအလုပ်]
① Earthwork [ကုမ္ပဏီ] နေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၂၀၀၀ ယန်း ~ တစ်ရက်နေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၀,၀၀၀ ယန်း ~ ②တိုကို [ကုမ္ပဏီ] နေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၅၀၀၀ ယန်း ~ [တစ်] နေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၂၀၀၀ ယန်း ~ ..
Yoshikawa Gumi Co. , Ltd. ၏အလုပ်များဟုတ်လား
“ တစ်သက်တာအတွက်အသုံးဝင်သောနည်းစနစ်များ” ကိုအတွေ့အကြုံမရှိသော★ထံမှကောင်းစွာရပြီးလှုံ့ဆော်မှုပေါ် မူတည်၍ ၀ င်ငွေရကြပါစို့
■လစဉ်လစာလစာ - အတွေ့အကြုံ - ယန်း ၂၀၀,၀၀၀ ~ အတွေ့အကြုံရှိသူ - ၂၅၀၀၀၀ ယန်း ~ ဆိုက်စီမံခန့်ခွဲမှု - ၃၀၀၀၀၀ ယန်း
တိုကျို Edogawa ရပ်ကွက်၊ Katsushika ရပ်ကွက်၊ Koto ရပ်ကွက်၊ Sumida ရပ်ကွက်၊ Arakawa ရပ်ကွက်နှင့် Kanto တစ်လျှောက်ရှိရပ်ကွက် ၂၃ ★တိုက်ရိုက်ပြန်လာ OK!လမ်းပေါ်မှာပေါ်နိုင်ပါတယ်
Hitoken Co. , Ltd.
[ဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများခေါ်ယူခြင်း (လူနေအိမ်မြေယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ကျောက်ခင်းလမ်း၊ ပိတ်ဆို့မှု၊ အပုံအစရှိသဖြင့်)] သင်ကအတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူငယ်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊၎င်းသည်တောက်ပ။ ပျော်စရာကောင်းသော၊
●ဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများ / လူနေအိမ်မြေယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း၊
●နေ့စဉ်လစာ [အတွေ့အကြုံမရှိသော] ယန်း ၁၁၀၀၀ ~ [အတွေ့အကြုံရှိသူ] ယန်း ၁၅၀၀၀ ~ * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်များကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။ မင်းရဲ့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့အညီငါတို့လစာကိုဘယ်အချိန်မဆိုမြှင့်မယ်။
●တိုကျိုရှိ Itabashi-ku၊ တိုကျိုနှင့်ကန်တိုဆင်ခြေဖုံးဒေသများရှိ site အားလုံး။
Hitoken Co. , Ltd.ဟုတ်လား
Toyoshima, Shinjuku, Shibuya နှင့် Suginami ရှိအလုပ်အမျိုးအစားများအားဖြင့်အလုပ်များကိုချုံ့ပါ
မြေလုပ်ငန်း / အထွေထွေ (17)
Toyoshima, Shinjuku, Shibuya နှင့် Suginami ရှိအလုပ်များအားအမျိုးအစားအားဖြင့်ကျဉ်းမြောင်းအောင်လုပ်ပါ
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ / ဗိသုကာ (33)
Toyoshima, Shinjuku, Shibuya နှင့် Suginami ရှိအလုပ်များကိုချုံ့ပါ
အလုပ်သင် / အတွေ့အကြုံမရှိသောကြိုဆိုခြင်း (28)
လူမှုဖူလုံရေးအပြည့်အ ၀ တပ်ဆင်ထားသည် (27)
သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေမှာ "Teshima / Shinjuku / Shibuya / Suginamiဒါဟာ "ဖြစ်ပါတယ်။